DCM akatevedzana simba modules dzinokudziridzwa kuvandudza kutsanya ndinorova ruzivo motokari yemagetsi. With rokusika magadzirirwo tsanzira chimiro, simba modules kushandisa mamiriro-of-nounyanzvi technology (Vienna + LLC), aendesa zvinoverengeka indasitiri-zvichiita yapakuvamba mabasa.
Self-dzakabudirira simba module
Low simba rakawanda
Garandi: 1 makore
Unique Okurara Mode
In stanby mamiriro, kuti enery kunotangira simba module chikamu uchishandisa mari ndiro. DCM akatevedzana simba modules kudzora standby simba mukati 8W, uye simba hope muoti (patented zvemichina) iri kunyange zvishoma pane 2W, achidzikisa zvikuru uchishandisa mari.
Ziva Parallel Mode
High Conversion kunyatsoshanda
Kunopindirana Temperature Monitoring
Temperature zvichiongororwa mberi kusvika 8 pfungwa dzakadai ambient temerature, DSP kudzora redunhu, simba mano, rinobva mano uye zvichingodaro, izvo nechokwadi kwazvo akatsiga uye rakavimbika nokushanda nesimba module
Shandisa proprietary zvivako stengthen kudzivirira semiconductor mano. Automatic spraying urongwa nhatu-proofing unhani, thickening kuiswa chisimbiso chinoumba zvikamu, uye zvichingodaro nezviyero kuwedzera pamusoro denfenses kuti mwando, munyu pfapfaidzo uye chakuvhe.
DSP digitaalinen kuzvidzora kuderedza analoginen mano, nyanzvi kupisa aibuda magadzirirwo kuderedza tembiricha simuka, refu-upenyu electrolytic capacitors uye dzakawanda muchiso kuurongwa nechokwadi unhu simba modules.
Wide Inzwa Zvinotaurwa Voltage Range
DCM akatevedzana simba modules vane chiyamuro voltage kubva 260Vac kuna 470Vac, inowirirana EV yokutevedzera akasiyana voltage yomuropa, achitsigira uchiraira zvose mumabhazi yemagetsi uye dzemagetsi sedans.
Tichishanda tembiricha kubva -30 ° C ~ 75 ° C (Derating pamusoro 55 ° C), DCM akatevedzana simba module basa zvakanaka uye yakavimbika mune zvakanyanyisa kuchitonhora uye kupisa ezvinhu.
DCM akatevedzana simba module vane kwakajairika kuchengetedzwa akadai chiyamuro overvoltage kudzivirira, chiyamuro undervoltage dziviriro, goho overvoltage dziviriro, goho ano muganhu unodzivirira, goho remudunhu pfupi kudzivirirwa, pamusoro tembiricha kudzivirirwa, uye vakaderera tembiricha kudzivirira. Zvinoitawo adopts PFC kuzunguzira-ne-wave kuitika muganhu kudzivirirwa uye LLC resonant mhango pamusoro kudzivirirwa ano (Patented zvemichina), kupa hwakavimbika hwokugadzira rutsigiro nokushanda nesimba modules.
Danho / Lines
3 danho + Pe
Kurara Mode Power
≦ 3% (100% yavose sezvavakatarirwa goho mutoro)
≧ 0.99 (25% -100% yavose sezvavakatarirwa goho mutoro)
DC chezita goho
Chetevere Voltage Akarurama
Chetevere Current Kutaura
≦ ± 0.1A, Takudzai ano <10a; ≦ ± 1%, Takudzai ano ≧ 10a
Manual yavaive uye otomatiki yavaive
- 30 ° C ~ + 70 ° C (Derating pamusoro 55 ° C)
Full-mutoro Working Temperature
5% -95% pasina condensation
≦ 60dB (25 ° C pana 380Vac, renguva mutoro goho)
Over / Under voltage dziviriro, Output ano muganhu unodzivirira, Output remudunhu pfupi kudzivirirwa, sefungu kudzivirirwa, pamusoro / Under tembiricha kudzivirira
Wallbox Ac Fast Charger , J1772 Plug Ev Charger, Ev Dc Yekuchaja Zviteshi , Type1 Socket Ev Charging Station, 10kw Portable Ev Charger, Universal Usb Socket Charger , All Products